China Large Metal Sculpture Wall Art Fish Sculpture Indoor Ornaments Art Design orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Piedra
Sarivongana metaly lehibe Wall Art Fish Sculpture Indoor Ornaments Art Design
Modely Tsia: MES04
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia famokarana matihanina ny orinasa vy tsy misy vy, izay misy ny orinasa any Xiamen, Sina. Ianao ve mahasarika an'io sary sokitra Stainless Steel io izay azo apetraka toy ny haingon-trano kianja. Sarivongana mivoatra lehibe dia miha-malaza sy be mpampiasa ary matetika ampiasaina amin'ny zaridaina, kianja, fialantsasatra, plaza, fandravahana tanàna. Stainless Steel dia afaka manohitra ny lanezy, orana, sunburn ary sns. Avelao fotsiny ho anay izay hafatra raha tena liana ianao!
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia famokarana matihanina orinasa stainless steel sculpture, izay manana antsika manokana any Xiamen, Sina. Ianao ve mahasarika an'io sary sokitra Stainless Steel io izay azo apetraka toy ny haingon-trano kianja. Sarivongana mivoatra lehibe dia miha-malaza sy be mpampiasa ary matetika ampiasaina amin'ny zaridaina, kianja, fialantsasatra, plaza, fandravahana tanàna. Ny vy matevina dia afaka manohitra ny oram-panala, ny orana, ny hazandrano ary ny sisa .. Avelao misy hafatra fotsiny aminay raha tena liana ianao!
Material Sarivongana metaly lehibe Wall Art Fish Sculpture Indoor Ornaments Art Design
Size Azo atao tahaka ny tianao
Laharana entana MES04
teknolojia Ny fanoratana sy ny polion
hateviny 2mm Custom
Application Haingo haingon-trano
Color Fitaratra fitaratra na loko hafa
Fe-potoana fandoavana T / T
1. Maharitra hafiriana ny baikoko?
Raha sary sokitra amin'ny 1.8m izy io, eo amin'ny 40 andro eo ny fotoana famokarana.
Ary ny sary sokitra goavambe dia handany fotoana bebe kokoa toy ny 50-60days.
2. Hafiriana no mety hitaterana sary sokitra?
Ho an'ny sary sokitra kely dia asaina mifidy ny fandefasana ranomasina ianao. Mandany 30 andro amin'ny firenenao izy io.
3. Azoko atao ve ny mahafantatra ny antsipirian'ny kaomiko amin'ny fizotry ny famokarana amin'ny fotoana rehetra?
Hanomboka hanao izany izahay aorian'ny fahazoana antoka ary manamarina ny vokatra ianao. Ho an'ny dingana rehetra amin'ny famokarana, ny fizahana, ny fonosana ary ny faritra fitaterana dia halefanay aminao ny mombamomba ny fandrosoana.
Previous: Metal Art Metal Sculptures Fan Shape Sculpture ho haingon-trano ivelany loko mena
Manaraka: Zavakanto kanto malaza fanaovana sary sokitra vy lehibe fanaovana sary sokitra an-kalamanjana
Sarivongana maoderina lehibe ho an'ny haingo anatiny